Barashada mashiinka ayaa sidoo kale bixisa karti soo kordheysa si loo helo aragti ku saabsan macaamiisha ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, korsashada shirkadaha B2B wali ma aysan dhaqaaqin. In kasta oo caanku sii kordhayo barashada mashiinka, wali waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan sida ay ugu habboon tahay fahamka hadda jira Adeegga macaamiisha B2B. Marka bal aan iska caddeyno taas maanta.
Adiga oo ku dabaqaya barashada mashiinka dhammaan macluumaadka macaamiisha aan ku aruurinno ficilladooda websaydhadeena, suuqleydu si deg deg ah ayey u maamuli karaan una fahmi karaan meertada nolosha iibsadaha, suuqa waqtiga-dhabta ah, kobcinta barnaamijyada daacadnimada, sameynta isgaarsiin shaqsiyeed iyo mid khuseeya, helitaanka macaamiil cusub iyo haysaa macaamiisha qiimaha leh muddo dheer.
Mar alla markii aad kala soocdo macluumaadka macmiilka, waa inaad awood u leedahay inaad go'aan ka gaarto waxa la sameynayo iyadoo ku saleysan xogtan. Waa tan tusaale:
In kasta oo waxyaabaha noocaas ah ay qaban karaan tilmaamo, inta badan booqdayaasha websaydhku way diidan yihiin inay wadaagaan aqoonsiyada emaylkooda ama lambarrada taleefannadooda si ay u eegaan waxa ku jira oo keliya. Sida laga soo xigtay natiijooyinka ka soo baxay The Manifest survey, 81% dadku waxay ka tageen foomka internetka inta la buuxinayo. Marka, maahan hab la damaanad qaaday oo lagu soo saari karo hoggaamin.
Barashada makiinada waxay u ogolaaneysaa suuqleyda B2B inay ka helaan hogaamin tayo leh shabakada iyagoon u baahneyn inay dhameystiraan foomamka diiwaangelinta. Tusaale ahaan, shirkad B2B ah ayaa adeegsan karta barashada mashiinka si ay u falanqeyso hab-dhaqanka websaydhka booqdaha oo ay ugu soo bandhigto waxyaabaha xiisaha leh qaab shaqsi ahaan u habboon waqtiga saxda ah si toos ah.